कसरी भव्य भाडाहरू बोल्न सिकाउने - प्वाइन्ट पाटका साथ कुराकानी
एक अचम्मलाग्दो रंगीन पक्षी पंख किनेको छ, धेरै मानिसहरु तुरुन्तै आश्चर्य गर्न थाल्छन् कि भाडामा बोल्न सिकाउन सम्भव छ कि छैन। यस लेखमा विचार गरौं कि आवश्यक पूर्वाधारहरू जुन तपाईंको पक्षीलाई अझ बढी संचार गर्न मद्दत गर्दछ, साथसाथै तपाइँसँग यसको साथ काम गर्न आवश्यक अभ्यासहरू। तपाईंको भागमा सानो प्रयास - र प्रश्न "कसरी बिगार्ने तोताहरू कुरा गर्न सिकाउने?" समाधान गरिनेछ।
प्रत्येक तोता एक व्यक्तित्व हो। यसैले, भविष्यवाणी एक विशिष्ट पक्षी छ कि भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। र यदि तपाईंको पालतू प्रतिभाहरू सानो हो भने, यो कहिलेकाहीं धैर्य र नियमित प्रशिक्षणको क्षतिपूर्ति गर्न सम्भव छ। कुराकानी गर्न छिटो कसरी छिटो सिकाउनुहुन्छ? दुर्भाग्यवश, यहाँ रश मदत गर्न सक्दैन। यो समय लाग्छ। केही ठूलो तोताहरू (जोको, कोकोटोस, अमेजन्स )सँग ध्वनिहरू प्रतिलिपि गर्ने क्षमता छ, तर सधैं मानव भाषण छैन। तिनीहरू नकल, उदाहरणका लागि, एक खाडी, हँसिलो वा वाशिंग मशीनको शोर। यदि तपाईं " समस्याको लागि भिराउने तोराहरू कसरी सिकाउनुभयो" समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने , तपाईं केवल रोगी प्रशिक्षणद्वारा मद्दत गरिनेछ।
त्यहाँ एक विचार हो कि यी चराहरु को महिलाहरु धेरै खराब बोल्छन्। यो जस्तो छैन। क्षमताहरू उनीहरूको लिङ्गसँग जोडिएको कुनै पनि तरिकामा छैनन्। र केही महिलाहरू शब्दहरू भन्दा बढी स्पष्ट रूपमा शब्दहरू बोल्छन्।
कसरी कुरा गर्न भव्य भाडाहरू सिकाउन
यो पक्षीको चाँडैको प्रशिक्षण सुरू गर्न आवश्यक छैन, तर उसले तपाईंको घर महसुस गरिसकेपछि, उनी आफ्नो कक्षमा बस्न र तपाईंका सबै परिवारका सदस्यहरूलाई भरोसा गर्न सक्षम हुनेछन्। रखरखाव र हेरचाहको अनुकूल परिस्थितिले तोता राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ, र उनी संचार गर्न इच्छुक हुनेछन्। सजिलो बोल्न एक युवा तोता सिकाउन सकिन्छ। यदि तपाईं चालीस दिनको उमेरमा लिनुभयो भने, त्यसपछि टिमको कार्य सजिलै हल गरिएको छ। यो अन्य पक्षीहरूको समाजमा राख्न योग्य छ। तर तपाई यसलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन - तपाईले पिंजरेलाई एक भीड, शोर स्थानमा राख्नु पर्दछ जहाँ चिरागले स्पष्ट मानव भाषण सुन्नेछ। खिलौनेको लागि प्रशिक्षण दिन उनको लागि अनावश्यक छ, यसले विचलित हुनेछ। तपाईंले भरिने भाँडाहरू बोल्न सिकाउनु अघि , तपाईंलाई कडा र मालिकको हातमा बस्न तिनीहरूलाई अनुकूल गर्न आवश्यक छ। चाँडै तपाईं ध्यान दिनुहुनेछ कि बिरुद्ध आफ्नो शब्दको लागि ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन्, यदि तपाईं तिनीहरूलाई चुपचाप, स्पष्ट र शान्त रूपमा बोल्नुहुन्छ भने। यो देखेर पछि तोताले आफ्नो आँखा बिस्तारै बन्द गर्छ र खोल्छ, धेरै चोटि शब्द दोहोर्याउनुहोस्। उच्च र स्पष्ट आवाज जस्ता पक्षहरू, त्यसैले केटाकेटीले बर्डलाई बोल्न सिकाउन सम्भव छ।
प्रशिक्षण उही व्यक्ति द्वारा आयोजित हुनुपर्छ (अधिमानतः यदि यो बच्चा वा महिला हो)। तोताले आफ्नो शिक्षक, एक अनुचित रूपले अशिष्ट र अपमानजनक मनोवृत्तिमाथि भरोसा राख्नुपर्छ। कसरतको समयमा, पक्षीहरूलाई ध्यान दिनुहोस् - सबै बाह्य ध्वजहरू हटाउनुहोस्, अन्यथा उत्सुक पाल्पाहरू तपाईले नबिर्सनु, तर आवाज सुन्नुहुनेछ। तोताको लागि पाठ नियमित रूपमा हुनुपर्छ, तर तिनीहरू लामो हुनु हुँदैन, अन्यथा पक्षी थकित हुनेछन्। यो बिहान र साँझ 15 मिनेटको लागि सिकाउन राम्रो छ र तुरुन्तै पाठ पछि एक उपचार दिनुहोस्। पहिला तपाईंलाई सरल मोनोसुलुलहरू दोहोर्याउनु पर्छ। त्यसोभए, जब तोता तिनीहरूलाई दोहोरिन्छ, शब्द संयोजनमा जानुहोस्।
कुनै पनि लेख्नको लागि कसरी बिच्छेदन गर्ने कुकुरको बिरालो: सुझावहरू र चालहरू
लक्सको प्रकार: वर्णन, प्रकृति, हेरविचार
म उल्टो उत्प्रेरित कसरी गर्छु? विषाक्तता को मामला मा एक पालतू जनावर कसरी मद्दत गर्ने?
बरफ स्क्रू बर्नाउल - प्रकार, विशेषताहरु, लाभ र बेफाइदा
शेष पाना - उद्यमी स्थितिको बारेमा जानकारी को मुख्य स्रोत हो
आमा र बच्चा लागि सबै भन्दा राम्रो। RSPC "आमा र बाल" (मिन्स्क)
अदुवा बियर - लामो-भूल विगतका वा सनक?
Rhubarb। खेती र हेरविचार